Fire HD 10, kaniiniga 'Amazon' ayaa loo cusbooneysiiyay mid ka awood badan oo dhalaalaya | Wararka Gadget
Amazon wuxuu sii wadaa inuu sharad ku galo dimuqraadiyeynta tiro wanaagsan oo ka mid ah qeybaha wax soo saarkooda aasaasiga ah, waa tan sida shirkadda Jeff Bezos ay u billaabaysay alaabooyin dhowr ah oo guud ahaan guuleysta qiimaha ugu weyn ee ay ku leeyihiin lacagta darteed. Kuwaas waxaa ka mid ah kuwa ku hadla, buugag elektaroonig ah iyo dabcan kiniinno.
Nala joog oo soo hel sababta kiniiniyadaan qaaliga ah ee Amazon badanaa ay yihiin kuwa ugu iibsiga badan iyo maxay yihiin awoodahooda farsamo, miyaad xiiseyneysaa inaad iibsato?
Sida had iyo jeerba ah, waxaan go'aansanay inaan lasocno falanqeynteena qoto dheer anagoo fiidiyow saarna kanaalkayaga YouTube, Fiidiyowgaan waxaad awood u yeelan doontaa inaad ku aragto boodhadh dhammaystiran si aad u eegto waxyaabaha ku jira sanduuqa Amazo Fire HD 10. Dabcan, waxaan sidoo kale ku qaadnaa tijaabooyinka qalabka, astaamaha faahfaahsan ee xitaa iyo xitaa shaashadda iyo kuwa ku hadla, maxaa fiidiyowgu u noqon karaa kaabis wanaagsan akhriska falanqaynta. Ha moogaanin oo noo dhaaf wax su'aalo ah sanduuqa faallooyinka.
2 Astaamaha farsamada iyo isku xirnaanta
3 Nidaamka hawlgalka iyo khibrada isticmaale
4 Khibrad warbaahin badan
Munaasabaddan, Amazon waxay go'aansatay inaysan wax cusub soo bandhigin, shirkadda Jeff Bezos waxay had iyo jeer doortaa naqshad iyo nashaadaad aan macquul ahayn oo dheeri ah, in kasta oo aysan soo jiidan doonin feejignaantooda sababtoo ah macaaniddooda, waxay sidaas u sameyn doonaan sababtoo ah iska caabin fiican. si loo garaaco oo loo xoqdo. Isla sidaas oo kale ayaa ku dhacday Dabkan HD 10 ee ka socda Amazon kaas oo quudiya inta ka hartay aaladaha la midka ah ee shirkadda sidaas darteedna wuxuu nooga tagayaa waxoogaa yar oo dhammaystiran oo dibedda ah oo la socda isticmaalka dheer, Matte madow iyo waxoogaa qalafsan oo polycarbonate ah oo kaliya astaanta dhoola caddeynta ee ku taal dhabarka kiniinkan weyn cabbirkiisa awgiis.
Amazon's Fire HD 10 ayaa hoos uga dhacday noocii hore ee 465 garaam
Cabirrada: X x 247 166 9,2 mm
Waxaan leenahay kamarad gadaal ah geeska kore, si la mid ah sida qeybta kore ay u wada xirmaan iyo badhamadu, dekedda USB-C, 3,5 mm Jack dekedda, laba badhan oo mug leh iyo badhanka awoodda. Dhinaceeda, shaashadda shaashadda, oo aan la qodayn, waxay leedahay naqshad fidsan oo ka caawisa meelaynta ilaaliyeyaasha. Waxaan leenahay kamarad loogu talagalay wicitaanada fiidiyowga oo ku yaal dhinaca bidix haddii aan u isticmaalno si toos ah iyo qaybta dhexe ee sare haddii aan u adeegsanno si qotodheer, sidii ay ula muuqatay in loogu talo galay.
Astaamaha farsamada iyo isku xirnaanta
Qeybtaan, Amazon kuma aysan caan bixin in lagu daro tiknoolajiyada ugu dambeysa iyo awooda qalabka qalabkaan, laakiin waxay isku dayeysaa inay bixiso xiriir adag oo u dhexeeya tayada iyo qiimaha. Xaaladdan waxay ku jiraan processor siddeed xudun oo ah 2,0 GHz shirkaddeeda aynaan garanaynin, in kasta oo wax waliba muujinayaan inay tahay MediaTek sida ku xusan falanqayntayada. RAM-ku wuxuu ku kordhaa 3 GB wadar ahaan inta lagu sharxayo keydinta 32 GB ama 64 GB iyadoo kuxiran qaabka la xushay.
Si aad isugu xirto waxaan leenahay Dual band WiFi 5, taas oo muujisay waxqabad wanaagsan oo ku saabsan falanqayntayada labada shabakadood ee 2,4 GHz iyo 5 GHz. Bluetooth 5.0 LE qAdiga ayaa mas'uul ka noqon doona wareejinta codka ee sameecadaha sameecadaha ama kuwa ku hadla, dhammaantood adigoon ilaawin dekedda 3,5 mm jaakad in dabkan HD 10 uu ku jiro qaybtiisa sare.
Sida kamaradaha, 2 MP oo loogu talagalay kamaradda hore iyo 5 MP oo loogu talagalay kamaradda dambe oo naga caawin doonta inaan ka baxno dhibaatada, iskaanno dukumiintiyada iyo ... wax kale oo yar.
Nidaamka hawlgalka iyo khibrada isticmaale
Sidaad sifiican u ogtahay, alaabooyinka dabka ee Amazon, hadey yihiin kiniinno ama aaladaha casriga ee TV-ga, waxay leeyihiin nooc loo habeeyay oo Android ah oo diiradda saaraya dadka isticmaala Amazon. Waxaan leenahay Fire OS, lakab Android ah oo aan lahayn Google Play Store, Si kastaba ha noqotee, waxaan rakibi karnaa APKs laga helo ilo kasta oo dibadeed oo aan u aragno inay ku habboon yihiin, maadaama ay si buuxda isula jaan qaadi doonaan. Dhinaceeda, Nidaamka Howlgalku wuxuu ka maqanyahay bloatware ka baxsan barnaamijyada isku dhafan ee Amazon iyo hagaajinta qalabka ayaa saameyn ku yeeshay waqtiga si habsami leh loogu socdo
Dhinaceeda, waxaan leenahay biraawsar kor loo qaadi karo, oo aad si dhaqso leh ugu beddeli karto Chrome haddii aad rabto. Intaa waxaa dheer, dukaanka arjiga ee Amazon waxaan ka heli karnaa noocyada Netflix, Disney + iyo inta soo hartay ee bixiyeyaasha mawduucyada maqalka ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan ku adkeysanayaa in ku rakibida APK-yada laga helo ilo dibadeed ay ku dhowdahay waajibaad, oo aysan jirin wax caqabad ah.
Dhinaca kale, kiniiniga la isticmaalayo ayaa si cad diirada loogu saaray cunitaanka waxyaabaha ku jira, akhri, caleenta ama daawada fiidiyowyada. Marka ay timaado in la ciyaaro fiidiyowga fiidiyowga, waxaan bilaabeynaa inaan helno dhibaatooyin kale oo xagga waxqabadka ah, sida laga filan karo qalabka la soo sheegay.
Khibrad warbaahin badan
Sidii aan horey u soo sheegnay, waxaan diirada saareynaa xaqiiqda ah inaanu cuni doonno nuxurka, sidaa darteedna ay muhiim tahay in la falanqeeyo waxqabadka socda hawlahan Amazon Fire HD 10. Xaaladdan oo kale, shirkaddu waxay sheeganeysaa inay kordhisay dhalaalka shaashadda 10% marka la barbar dhigo noocii hore, wax si daacadnimo ah u dareemo, taasoo ka dhigeysa mid aad u fiican in dibedda lagu isticmaalo. Si kastaba ha noqotee, maahan inaan leenahay dhalaal gaar ah oo xusid mudan, oo ku darsaday la'aanta shey ka-hortagga milicsiga micnaheedu waa inaan dhibaatooyin kala kulmi karno qorraxda oo buuxda, wax aan caadi ahayn.
Cabbirka Shaashad: 10,1 inji
Go'aan: 1.920 x 1.200 pixels (224 dpi)
Sida codka, waxaan haynaa labo kuhadlid ah oo sifiican uhadlaya oo bixin doona iswaafajin Dolby Atmos marka lagu daro rikoodhada caadiga ah. Waxay u shaqeeyaan si ka badan sida saxda ah waxayna bixiyaan dhawaq ku filan oo ay ku raaxaystaan ​​fiidiyowyada, filimada iyo muusigga.
Xagga ismaamulka, iyada oo aan la awoodin mAh waxaan kuu sheegi karnaa in aan helnay labo ilaa seddex maalmood oo si fudud loo isticmaalay, sidaasna ku wehelinaysa dekeddeeda USB-C iyo xarkaha 9W lagu daray taas oo Amazon naxariis ugu filan in lagu daro sanduuqa. Isugeyn, kudhowaad 12 saacadood oo shaashad ah.
Waxaan isku aragnaa kiniin 10,1-inji ah, qalab cabbira sidoo kale qiimahiisa iyo dalab xiisa leh oo loogu talagalay gaar ahaan cunitaanka waxyaabaha, ha ahaato goobaha ay bixiso Amazon lafteeda ama bixiyeyaasha dibadda. Qiimaheedu wuxuu noqon doonaa kudhowaad 164,99 euro nooca 32 GB ah iyo 204,99 euro oo nooca 64 GB ah. In kasta oo ay run tahay in dalabyada gaarka ah aan ka heli karno kiniinno dhammaystiran oo dhammaystiran qiimo la mid ah shirkadaha sida Chuwi ama Huawei, dammaanadda iyo qanacsanaanta ay bixiso Amazon ayaa ka ciyaari kara hanti muhiim ah arrintan. Waxaa laga heli karaa 26-ka Maajo websaydhka Amazon.
Ku dhejiyay: May 26 ee 2021
Naqshadeynta iyo qalabka loo maleynayo inay iska caabin karaan
Nidaamka hawlgalka ee aan lahayn bloatware
Isku xirnaanta la hagaajiyay
1GB dheeraad ah oo RAM ah ayaa ka maqan
Qiimaha ayaa si gaar ah u soo jiidan doona dalabyada
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Fire HD 10, kiniiniga Amazon waxaa loo cusboonaysiiyay mid ka awood badan oo dhalaal badan
Shure MV5C, oo si qotodheer u falanqeynaya makarafoon badan